Magaalada Muqdisho waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo ay kala sameynayaan Golaha Midowga Musharixiinta oo damacsan qabashada dibadbax & Xukuumadda Xil-gaarsiinta ah oo diidan in uu dhaco isu soo baxaas.
Saacado gudahood waxaa Warbaahinta hadallo iska soo horjeeda isku mariyay labada dhinac, waxaana dhan weliba uu sheegay in uu ka gungaarayo hadafkiisa ah qabashada & diidmada dibadbaxa qorshihiisu socdo.
Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka ayaa si cad u sheegtay in uusan dhici karin isu soo bax iyada oo laga duulayo xaaladda Dalka, gaar ahaan faafitaanka cudurka safmarka ah ee Covid-19 oo maalmihii lasoo dhaafay kiisas cusub ay diiwaangelisay.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xubin ka ah Golaha Musharixiinta ayaa BBC-da u sheegay in uu dhacayo isu soo baxooda, isla markaana aysan jirin sabab diidi karta ama qiil Xukuumadda xil-gaarsiinta ah uga dhigan karto is hor istaaggiisa.
“Wax is badalay malahan oo waa sidii lagu ballamay dibadbaxu waa uu dhacayaa 26-ka Febaraayo 2021, ujeedka ayaa ah in aan muujin karno xorriyad & dhaqdhaqaaq, Dastuurka Dalka qodobkii 20-aad ayaa inoo fasaxaya xaqqa muwaadinta innaga oo aan cid waydiisan” Sidaasi waxaa yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Waa uu sii hadlay Cabdiraxmaan waxaana uu yiri “Dadka ka qaybgalaya dibadbaxa waxa aan siinaa talooyinka Covid-19, Gacmaha waan ka dhaqnaa oo waxa aan u xirnaa Face Mask, taxadarka dhankeena wuu ka socdaa oo mas’uuliyadda annaga ayay na saaran tahay, Dowladdu way sheegi kartaa balse dhaqangalka waa dhankeena”.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in dano siyaasadeed laga leeyahay joojinta dibadbaxa, maadaama nolosha Magaalada ay caadi tahay oo ay furan yihiin Goobaha Ganacsiga, Waxbarashada, Masaajidda & meelaha kale ay Bulshada ku kulanto.
“Doorasho waxaa la geli karaa marka la ogaado xorriyadda siyaasadeed, waa in aan dibadbax nabadeed dhigi karaa, waa in aan la kulmi karaa xildhibaanka, waa in aan jidadka nalaga celin, markaas ayay doorasho dhici kartaa” Sidaasi waxaa yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.